(Aqriso) Jadwalka xaraashka shidaalka Soomaaliya | Wardoon
Home Somali News (Aqriso) Jadwalka xaraashka shidaalka Soomaaliya
(Aqriso) Jadwalka xaraashka shidaalka Soomaaliya
Wargeyska Offshore Magazine ee wax ka qora arrimaha shidaalka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Soomaaliya ay qabaneyso yaboohyada 15 ceel-shidaal, taasi oo qeyb ka ah bixinta shatiyada la bixinayo sanada 2019 ee goobaha shidaalka ee badda ku dhex-yaalla.
Warbixinta wargeyska oo soo xiganaya mas’uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda, ayaa ka duwan warkii ay mas’uuliyiinta dowladda u sheegeen warbaahinta Soomaalida ee ah inaysan iibineyn ama gorgorton gelineyn xirmooyinka shidaalka Soomaaliya.
Wargeyska ayaa qoray in shirkii London, ee ay abaabushay shirkadda Spectrum lagu dejiyey heshiisyada arrinta. Shirkaas ayaa dowladda waxay sheegtay inuu ahaa kaliya mid lagu soo bandhigayey xogta shidaalka Soomaaliya, ee aan wax suuq geyn ah shaqo ku lahayn, balse waxaa muuqata inuu sidaas ka duwanaa.
Wasiirka batroolka Soomaaliya, Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa u sheegay Offshore Magazine in wareegii koowaad ee bixinta shatiyada shidaal qodista Soomaaliya looga dhawaaqay magaalada Cape Town, bishii November ee 2018.
“Sanadihii dhowaa wasaaradda iyo dowladaba waxay ka shaqeynayeen sidii qorshahan loo dejin lahaa” ayuu yiri.
Shirkadda Spectrum ayaa sida uu wargeyska sheegay iibsatay xogta shidaalka ee goobaha badda, waxaana sida uu sheegay agaasimaha wasaaradda batroolka, Karar Shukri Doomay, kheyraadka shidaalka ee xeebta Soomaaliya uu noqon karaa kan ugu ballaaran Bariga Afrika ama qaaradda oo dhan.
Doomay ayaa sheegay in 11-ka July 2019 ay tahay taariikhda loo gooyey in shirkadaha daneynaya in iibsadaan xirmooyinka ay soo bandhigaan inay buuxin karaan shuruudaha, halka 29-ka August loo qabtay shirkadaha qodaya ceelasha laga rabo inay soo bandhigaan khibradooda ceel-qodis.
Gorgortanka shirkadaha ayaa ayagana loo qabtay inay ugu dambeysa soo bandhigaan 7-da November ee 2019, waxaana bil kadib la saxiixi doonaa heshiiska wadaagista wax soo saarka ee shirkadaha iyo dowladda Soomaaliya. Heshiiska ayaa dhaqan geli doona 1-da Janaayo, 2020, markaasi oo la billaabayo qodista shidaalka Soomaaliya.
Previous articleDAAWO:-Boqor Hargeysa Ku sugan oo Hanbalyo u Diray Madaxweyne Farmaajo
Next articleCeyrintii Jose Mourinho oo kubaxday 19.6 milyan oo giniga
AMISOM oo Taliye Cusub loo soo magacaabay+SAWIRRO
Badhan oo noqotay magaalo ay ku hirdamayaan Somaliland Iyo Puntland +VIDEO